Otomatiki zvidimbu zviviri tini inogona penzura bhokisi kugadzira michina, China otomatiki 2 zvidimbu tini inogona penzura bhokisi kugadzira michina Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - G STAR KUTENGA LIMITED
Imba>Tin Inogona Kugadzira Machine
Otomatiki 2 zvidimbu gaba rinogona penzura bhokisi kugadzira michina
Minimum Order Yakawanda: 1 Set
Packaging Details: Nyaya yematanda
Nguva Yokutora: Nguva dzakakomberedza 45days
Kupa Mikana: 1000sets pamwedzi
Inokodzera kugadzira maviri-chidimbu magaba
● Huwandu hwenhepfenyuro hunogona kutemerwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, uye anosvika matanhatu zviteshi anogona kudhonzwa panguva imwe chete kudzikisa mutengo wevashandi uye kuita kwakanyanya-kushanda mashandiro.
● Iyo inotora yeJapan inopinza magetsi ekudzora system uye Mitsubishi servo mota.
● Iyo yekubata skrini ndeye Chinese chinongedzo, chiri nyore kushanda, chiri nyore kugadzirisa, uye servo mota inoshandiswa seye pusher drive mudziyo, uye kupihwa kwakarurama:
● Iyo michina yakagadzirirwa nefonielectric sensor inodzivirira mudziyo uye alarm system. Kana iyo michina ikawanikwa iine huipi, inozomira yega nekurira alarm uye inoratidza nzvimbo yekukanganisa pane yekubata skrini.
● Iyo michina yakagadzirirwa otomatiki lubrication system kuona kushanda kwenguva refu kwemidziyo.
● Zvinoenderana neshoko rezvibhakera zvemakanika, simba rekurova kwechishandiso rinowedzerwa.
● Zvinoenderana neiyi poindi yekukwikwidza kwechibhakera-chimbi, iko kusimba uye kugadzikana kwezvibhakera zvepamusoro uye zvepasi zvakagadziridzwa.
● Zvibhakera zvepamusoro uye zvepasi zvakagadzirwa nematatu-nzvimbo die shank maburi zvakateerana. Sekureva kwechigadzirwa chigadzirwa, kurova-kufa kamwechete kana kurova-kufa kunogona kurova
Single punchi muforoma kugadzirwa chinzvimbo 20pcs / min-50pcs / min
Double punchi muforoma kugadzirwa chinzvimbo 40pcs / min-100pcs / min
Kudyisa servo mota 600W
PLC kudzora FXIN60MT
Machine saizi 4000X655X1850mm
Gross uremu 4000kgs
Yedu otomatiki 2 Pieces Tin Inogadzira muchina unokwanisa kugadzira zvidimbu zviviri zvakapetwa tini mabhokisi rectangle penzura tin kesi, tii inogona mudziyo. Iyo inongodyisa yega uye inogadzira tini maumbirwo aunoda iwe. Inogona kugadzira hukuru hwakasiyana hwemabhokisi emataini nekuchinja kufa. Inogona kuchengetedza mabasa uye mashoma kushandisa simba.